कोभिडविरुद्धको खोप आए पनि २० लाख मानिसको मृत्यु हुनसक्ने डब्ल्यूएचओको चेतावनी – हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ आश्विन १०, शनिबार ०४:५८
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा आउनुअघि विश्वभरि कोभिड १९ सँग सम्बन्धि कारणले ज्यान गुमाउने मानिसको सङ्ख्या २० लाख नाघ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
डब्ल्यूएचओका आपत्कालीन मामिलाका प्रमुख डा. माइक रायनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नभएमा मृतकको सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्ने बताएका छन् । गत वर्षको अन्त्यमा चीनमा कोभिड १९ देखा परेयता यस रोगबाट अहिलेसम्म ज्यान गुमाउने मानिसहरूको सङ्ख्या १० लाख पुग्न लागेको छ ।
सङ्क्रमितहरू बढ्ने क्रम जारी रहँदा अहिलेसम्म विश्वभरि तीन करोड २० लाखभन्दा बढी मानिसमा यो भाइरसले सङ्क्रमण गरेको पुष्टि भएको छ । हिउँद आउन लाग्दा उत्तरी गोलद्र्धका थुप्रै देशमा सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुन लागेको देखिन्छ । माइक रायनका अनुसार अहिलेको गति कायम रहने अवस्थामा खोप तयार हुनुअगाडि नै थप १० लाख मानिसको मृत्यु हुने उच्च सम्भावना छ ।
उनले यस रोगको उपचार पद्धतिमा सुधार आइरहँदा मृत्युदर भने घटिरहेको बताए । तर उनले सुधार गरिएको उपचार पद्धति र प्रभावकारी खोप मात्रै पनि २० लाखको सीमा रोक्न पर्याप्त नहुने बताए । माइक रायनले सरकारहरूलाई कोभिड १९ नियन्त्रण गर्न आवश्यक हरेक उपाय अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
केही दिनयता युरोपमा फेरि ठूलो सङ्ख्यामा देखिने क्रम सुरु भएको छ । त्यसले गर्दा पहिलो लहर उत्कर्षमा रहेका बेला लगाइए झैँ देशव्यापी लकडाउन हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ । युरोपको अवस्थाबारे डा. रायनले समग्रमा उक्त विशाल क्षेत्रमा हामीले यस रोगको चिन्ताजनक वृद्धि देखिरहेको बताए ।
उनले युरोपेलीहरूले लकडाउन लगाउने अवस्था छल्नका लागि के पर्याप्त कामहरू गरिएको छ त भनेर आफैँलाई प्रश्न गर्न आग्रह गरे । परीक्षण र सङ्क्रमितको संसर्गमा आएका व्यक्तिको पहिचान, क्वारन्टीन र सामाजिक दूरीको कायम गर्ने जस्ता विकल्पहरू लागु भए नभएको समेत मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरे । डब्ल्यूएचओ मुख्यालय जिनिभामा बोल्दै उनले लकडाउन भनेका अन्तिम विकल्प हुन् ।
अहिलेसम्म अमेरिका, भारत र ब्रजिलमा सर्वाधिक सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यी तीन देशको कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या मात्र डेढ करोडभन्दा माथि छ । विश्वभर कोभिड १९ बाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दश लाख नजिक पुगेको छ । अमेरिकाका अग्रणी सङ्क्रामक रोग विज्ञ एन्थनी फाउचीले आफ्नो देशमा अहिलेसम्म सङ्क्रमणको पहिलो लहर नै अन्त्य नभएको बताए ।
उनले दोस्रो लहरको कुरा गर्नुभन्दा किन हामीले हिउँद वा शरद्का लागि तयार हुने कुरा नगर्ने? भन्दै प्रश्न गरे । अमेरिकामा अहिलेसम्म यो भाइरसबाट ७० लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन्। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित कारणले दुई लाख जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । त्यसपछि रहेको भारतमा ५८ लाखभन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन् । त्यहाँ ९२ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
Spread the loveयुक्रेनमा एउटा सैन्य विमान दुर्घटना हुँदा कम्तिमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । खार्किभ एयर फोर्स विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सवार विमान अवतरणका क्रममा युक्रेनको पूर्वी शहर खार्किभमा दुर्घटनामा परेको हो । मृतक अधिकांश वायु सेनाका प्रशिक्षार्थी जवान रहेका युक्रेनका अधिकारीलाई उद्धृत गरी बीबीसीले जनाएको छ । रुसी आपतकालीन मन्त्रालयका […]